Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » South African Airways ekwuputala onye isi ọrụ nwa oge
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Simon Newton-Smith akpọrọ onye isi nchịkwa SAA ọhụrụ: Azụmaahịa
Simon Newton-Smith ejirila Virgin Atlantic Airways na Qatar Airways nwee ọkwa onye isi.
Simon Newton-Smith akpọrọ onye isi nchịkwa SAA ọhụrụ: Azụmaahịa.
Simon Newton-Smith sonyeere ndị otu SAA na Johannesburg.
Simon Newton-Smith bụ ọkachamara n'ịkwọ ụgbọ elu nke nwere ndekọ egwu zuru ụwa ọnụ.
South African Airways (SAA) nwere obi ụtọ ịkpọsa nhọpụta nke onye ọrụ ụlọ ọrụ ụgbọ elu, Maazị Simon Newton-Smith, n'ọnọdụ SAA Interim Executive: Commercial.
Simon sonyere ndị otu ndị isi South Africa Airways na Johannesburg, South Africa nwere nnukwu ụgbọ elu mba ofesi sonyeere SAA na 2000 wee jee ozi dị ka onye isi oche, Ahịa na North America, ebe ọ na -edu ahịa, nkwado azụmaahịa, otu na ọnụahịa. ngalaba. Ya na Virgin Atlantic Airways jikwa ọkwa onye isi dị ka osote onye isi ala, Ahịa na North America na onye njikwa obodo na South Africa, yana Qatar Airways na Doha dị ka onye isi osote onye isi ala, usoro azụmaahịa.
South African Airways'Onye isi ụlọ ọrụ nwa oge, Thomas Kgokolo, na -akọwa Simon dị ka onye ọkwọ ụgbọ elu nwere ọfụma nke nwere ndekọ egwu zuru ụwa ọnụ nke ịnya ego na -erite uru na ịgbakwunye ọnụ ahịa ndị ahịa na ngalaba asọmpi, dị mgbagwoju anya na ngwa ngwa. Simon na -agbakwụnye nke ukwuu n'ike otu ndị isi anyị dị iche iche ma nwee ahụmịhe - ha niile bụ ndị akwadoro ugbu a ma dị njikere ịga n'ihu SAA. Ọ na -ewetara ahụmịhe bara ụba nke ga -abara SAA na ndị ahịa anyị na ndị mmekọ azụmahịa njem gburugburu ụwa uru.
"Enwere m obi anụrị isonye na SAA ka ọ na -amalite isiakwụkwọ ọhụrụ na akụkọ ụgbọ elu South Africa. Newton-Smith kwuru, sị, "Nke a bụ ụgbọ elu nke nwere ọgaranya na anyaụfụ n'ụwa niile, mụ na ndị isi ga-arụkwa ọrụ ike na mbọ anyị na-anabata ndị njem azụ, na-abawanye ego na napụta uru", Newton-Smith kwuru.